Maalinta miinada adduunka oo laga xusay Garoowe. – Radio Daljir
Maalinta miinada adduunka oo laga xusay Garoowe.
Abriil 4, 2011 12:00 b 0
Garoowe, April 04 – Munaasabad ballaaran oo lagu xusayo maalinta miinada adduunka iyo waxyaabaha qarxa ayaa maanta lagu qabtay magaalada Garoowe. Munaasabaddan ayaa waxa ka soo qayb-galay xubno ka mid ah golaha xukuumadda Puntland oo uu hogaaminayo madaxwayne ku-xigeenka puntland Jen. Cabdisamad Cali Shire iyo saraakiil ka socota hayadaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa qaabilsan miinada iyo waxyabaha qarxa.
Waxa halkaasi lagu soo bandhigay dhibaatada ay miinadu u gaysato dadka iyo waliba deegaanka iyadoo lagu Soo bandhigay baaritaan lagu sameeyey tirada dadka sanad walba wax-yeelladu ka soo gaarto iyo Kuwa u dhinta wax-yeellada miinada iyo walxaha qarxa.
Munaasabaddan oo lagu qabtay xarunta hay’adda miinooyinka iyo waxyaabaha qarxa ee magaceeda lagu soo gaabiyo PMAC, ayaa guddoomiyeheeda, Cabdirisaaq Ciise Xuseen waxa uu sheegay in waxyaabaha qarxa ay dhibaato aad u ballaaran ku hayaan bulshada, waxana uu soo bandhigay macluumaad iyo muuqaalo arrintaas tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya.
Madaxwayne ku-xigeenka dawladda Puntland ayaa ka mahadceliyay howlaha ay waddo hay’adda PMAC oo uu ku tilmaamay kuwo aad loogu baahan yahay in baddanna laga faa’iday. Sidoo kale wasiirka amniga Puntlnad Yuusuf Axmed Khayr isagoo ka codsaday hay’adaha ka shaqeeya miinada iyo walxaha qarxa in ay xoojiyaan hawlaha lagu ciribtirayo islamarkaana ay tagaan meelaha ay dagaalladu ka dheceen ama ay ku aasanyihiin miinooyinka si ay u yaraadaan dhibaatooynika ka soo gaara dadka iyo duunyada.
Daljir, Garowe. http://daljir.com/